Iyo Era yeMafuta Ekutenga Ngoro Ngoro | Duoduo
Iyo Era yeSmart Shopping Makets
Nekuvandudzwa kwehunyanzvi hwekuchenjera hunyanzvi uye shanduko nyowani muindasitiri yekutengesa, makambani mazhinji atanga kugadzira kana kushandisa macarget anotenga engoro. Kunyangwe ngoro yekutenga yakangwara ine zvakawanda zvinobatsira zvekushandisa, inodawo kutarisisa zvakavanzika uye zvimwe zvinhu.
Mumakore achangobva kupfuura, matekinoroji eruzivo-nyowani akadai seungwaru hwe kungwaru uye neInternet yezvinhu zvakavandudzika nekukurumidza, uye maficha matsva eupfumi senge e-commerce aramba achikura, achityaira shanduko mumaindasitiri mazhinji. Ikozvino, kuitira kuti ienderane nekushanduka kutsva pamusika uye kupa masevhisi ari nani, makambani mazhinji atanga kushandisa kudzidzisa kwakadzama, biometric, kuona kwemuchina, sensors uye humwe matekinoroji kuvandudza makatuni ekutenga akangwara.
Semhare yekutengesa yepasi rese, Wal-Mart anowana kukosha kukuru kusimudzira mabasa ekuvandudza kuburikidza nehunyanzvi. Pakutanga, Walmart akanyorera patent ye smart kutenga ngoro. Zvinoenderana ne patent, iyo Walmart Smart Shopping Cart inokwanisa kutarisa mutengi wemoyo uye kupisa kwemuviri munguva chaiyo, pamwe nesimba rekubata muchinjiko mubato wechitoro, iyo nguva yekumberi kubatwa, uye kunyange kumhanya kweiyo ngoro yekutenga.
Wal-Mart anotenda kuti kana ngoro yekutenga yakangwara ikaiswa mukushandiswa, inounza ruzivo rakanakisa rebasa kune vatengi. Semuenzaniso, maringe neruzivo rwemhinduro kubva kungwara yekutenga yakangwara, Wal-Mart anogona kutumira vashandi kuti vabatsire vakweguru kana varwere vanogona kunge vari mudambudziko. Uye zvakare, iyo ngoro yekutenga inogona zvakare kubatana neiyo APP inonzvera yekutarisira calorie kushandiswa uye imwe yehutano data.
Parizvino, ngoro yekutengesa yakangwara yeVolvo ichiri padanho repent. Kana ikapinda mumusika mune ramangwana, inotarisirwa kuunza zvimwe zvikwanisiro kubhizinesi rayo rekushambadzira. Nekudaro, maindasitiri ehupfumi mukati akati iyo ngwara yekutenga yakangwara inoda kuunganidza yakawanda ye data, iyo inogona kutungamira kusaziviswa zvakavanzika, uyezve kuchengetedzwa kwemashoko kunoda kuitwa.
New World Dhipatimendi Smart Smart Shopping Cart
Kunze kwaWal-Mart, E-Mart, mutengo wakakura wekudzvanywa unotengeswa neSouth Korea chitoro cheNew World department Store, yakaburitsawo ngoro yekutenga yakangwara, ichatanga kushanda kwematare munguva pfupi iri kutevera kukwikwidza kukwikwidza kwekusagadzikana kwekambani. nzira dzekuparadzira.
Sekureva kwaE-Mart, ngoro yekutenga yakangwara inonzi "eli", uye maviri acho anozoiswa muchitoro chekuchengetera imba-yezasi kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweSeoul kwemazuva mana. Nekubatsira kweiyo yekuziva system, ingwara yekutenga yakangwara inogona kungoteedzera vatengi nekuvabatsira kusarudza zvigadzirwa. Panguva imwecheteyo, vatengi vanogona zvakare kubhadhara zvakananga nekadhi rechikwereti kana kubhadharwa kwenhare, uye smart ngoro yekutenga inokwanisa kuzvitonga yakazvimirira kana zvinhu zvese zvabhadharwa.
Kusiyana naWal-Mart uye New World department Store, Chao Hei ikambani yekutsvagiridza uye yekuvandudza kugadzira ngwara dzekutenga dzakangwara. Zvinonzi Super Hi yakanakira kutenga ngoro, iyo inotarisa pachezvako-yekugadzirisa pekugara, inoshandisa matekinoroji senge muchina kuona, sensors, uye kudzidza zvakadzama kuti ubatsire kupedza dambudziko remitsetse mirefu muchitoro.
Iyo kambani yakati parizvino, mushure memakore akati wandei ekutsvagiridza nekusimudzira uye kuchidaro, ngoro yekutenga yakangwara inogona kutoziva 100,000 + SKU voita kukurudzira kwakakura. Parizvino, iyo Super Hi Smart Shopping Cart yakavambwa mumasupamaketi mazhinji eWumart muBeijing, uye ine zvirongwa zvekutakura muShaanxi, Henan, Sichuan nedzimwe nzvimbo pamwe neJapan.
Smart anotenga ngoro ari Hukuru
Ehezve, hazvisi zvemakambani aya chete zvinokudziridza ngwara dzekutenga dzakangwara. Nekuda kwekuwedzera kwehungwaru hwekunyepedzera uye kutengesa kutsva, zvinotarisirwa kuti zvinyoro-nyoro uye mashopu anodhura anozotangisa zvigadzirwa zvengoro munguva yemberi, nekudaro zvichikurudzira kuzadzikiswa kwekushambadzira, kufuratira iyi hombe yegungwa bhuruu, uye kugadzira nyowani huru musika.
Kune makambani ekutengesa, kushandiswa kwemotokari dzakatengwa zvakadzama pasina mubvunzo kunobatsira kwazvo. Kutanga, ngwara yekutenga yakangwara pachayo ndeyakanaka yeruzhinji pfungwa inogona kuunza zvigadzikiso zvekambani kune iyo kambani; chechipiri, ngwara yekutenga yakangwara inogona kuunza vatengi chiitiko chitsva chekutenga uye kuwedzera mushandisi viscosity; zvakare, akangwara kutenga ngoro anogona kuwana rakawanda kiyi bhizinesi Data iri zvakanaka kubatanidza akasiyana zviwanikwa, kuderedza kushanda kushanda, uye kuwedzera kutengesa purofiti. Chekupedzisira, ngwara yekuchenjera yekutenga inogona kushandiswawo sepuratifomu yekushambadzira, iyo isingagone kutaurirana zvakanyanya nevatengi, asi zvakare inounza imwe mari yakawanda kune emabhizinesi.
Zvese mune zvese, kutsvagiridzwa nekusimudzirwa kwema ngwara ekutenga zvakatokura, uye kukura kwemusika kwakawanda kunotarisirwa. Zvimwe hazvingatore nguva yakareba kuti isu tisangane neyekuchenjera kutenga ngoro muzvitoro uye mumashopu ekutenga, uye ipapo tichava nemukana wekutenga wakangwara.
Nguva yekutumira: Jul-20-2020